Iyo Blurry Mitsara yeKushambadzira Kudzoka pane Investment Martech Zone
NeChishanu, Kurume 28, 2014 NeChishanu, Kurume 28, 2014 Douglas Karr
Nezuro, ndakaita a did a session kuSocial Media Marketing World inonzi Maitiro Eku Shift Kubva Mukukura Vateveri kuenda Kuburitsa Mhedzisiro NeSocial Media. Ini ndinowanzo kuve anopokana kumazano anoramba achisundidzirwa muindastiri ino ... kunyangwe kusendamira zvishoma pane inopokana. Chirevo chechokwadi ndechekuti mabhizinesi anoenderera mberi achitsvaga fan uye vateveri kukura mumasocial media - asi ivo vanoita basa rinotyisa kwazvo rekushandura vateereri vanoshamisa kana nharaunda yatove munzvimbo.
Mukati mechikamu, ini ndakatoenda kusvika pakubvunza mazhinji eiyo Kuyera kwe ROI anozviti kunze uko kana zvasvika pakudzoka kune investment kune ako enhau midhiya. Imwe yeshamwari huru dzeblog iri Eric T. Tung… Akakurumidza kutumira mashoko kuTwitter:
Usaende ku @Nicole_Kelly's chikamu, chinokonzera magariro enhau ROI ndeye BS! @douglaskarr # SMMW14
- Eric T. Tung (@EricTTung) March 27, 2014
Zvainyanya kuseka sezvo shamwari yangu yairemekedzwa (uye karaoke master), Nichole Kelly, panguva imwe chete achigovana chikamu chake: Mhando Dzosera Kudzoka Iyo Keteni paKuyera Nhau dzeMagariro ROI. Doh!
Hakusi kuti handitendi kuti kune dzoka pakudyara - Ini ndinotenda pane kudzoka kukuru pane kudyara kwenzanga. Muchokwadi, ndinotenda zviri nani kwazvo kupfuura makambani mazhinji anotenda izvozvi. Dambudziko ndiko kuyerwa. Kune nzira dzakawanda idzo ako enhau midhiya ekuedza anokanganisa kudzoka pane kudyara:
Kutungamira Kupiwa - vanhu vakaona meseji uye vakatenga.
Chakananga Kupa - vanhu vakagovana meseji kana kuendesa mumwe munhu munharaunda kwauri uye vakatenga.
Brand Kupa - vanhu vanoona iwe online uye kukuona sechiremera muindastiri yako, uchivatungamira kunzvera zvigadzirwa zvako nemasevhisi.
Kuvimba Mupiro - vanhu vanokutevera pamhepo, unowana kuvimba kwavo, uchivatungamira kuti vatenge zvigadzirwa zvako nemasevhisi.
Kutungamira kupiwa kuri nyore kuyera… imwe yakanaka mushandirapamwe yekutevera uye iwe wainyora pasi pat. Dambudziko ne kuyera midhiya enhau ROI inouya nevamwe. Havagare vachishandisa yako yekutevera mushandirapamwe - kana vanosvika votenga kune yako saiti kuburikidza nedzimwe nzira dzekutengesa pamhepo.
Google Analytics ine chishandiso chakanakidzwa chinonzi iyo Multi-Channel Shanduko Visualizer uko iwe kwaunogona kuona kana kwete vashanyi vako vakashandisa yakawanda nzira dzekuenda kune yako saiti. Mune ino chaiyo skrini pazasi - iwe unogona kuona uko iyo mitsara iri kuve isina kujeka. Chikamu chakakura kwazvo chekushandurwa pane ino saiti chakabva kune vanhu vakawana saiti nenzira inopfuura imwechete.
Ipo iwe uchigona kupedzisa kuti havana chirongwa chakanakisa chekushambadzira email - kushandisa chaiyo ROI pane yekuendesa traffic maringe ne organic search hazviite nekuti haugone kupinda mune ese evashanyi musoro uye kusarudza izvo chiteshi ndiko kudyara kwakavaita kuti vasarudze kutenga.
Ini ndaizoendesa kuti hazvisi izvo, chiyero chevose. Vashambadzi vanozofanirwa kunzwisisa kuti yega yega nzira yavo inobata sei imwe. Paunodzora enhau enhau kuedza, semuenzaniso, inogona kukanganisa maitiro ako ekutsvaga ekushandura! Sei? Nekuti vanhu havadi kuziva kuti chii chako zvigadzirwa uye masevhisi ari uye saka havatsvage iwe Kana ivo havana kuvimba, saka ivo vanotsvaga vakwikwidzi vane zvirinani kugara pamberi pevanhu uye vanoshandura navo pachinzvimbo. Kana munhu wese ari kutaura nezvevakwikwidzi vako avo do uve nehukama hwakasarudzika… izvo zvinotungamira kune zvimwe zvinyorwa nezve makwikwi ako ... izvo zvinoita kuti vatore chinhanho.
Sevashambadziri, isu tiri mukuda kwekufungidzira analytics zvishandiso zvinoona kushanda uye hukama hweyedu yese kuyedza - zvichitibatsira kuti tinzwisise kuti vanodyidzana sei uye kuti vanoshanda sei mumwe nemumwe. Izvo hazvichisiri kana tichida kugovana munharaunda uye kuyera kudzoka pane iko kuedza mune yakanangana kupiwa, inyaya yekuyedza uye kugadzirisa edu enhau nhamburiko nekuona kwakazara kweiyo zano kune ese edu edhijitari kushambadzira kuyedza.
Basa redu harichisiri rekuziva kuti ndeipi nhanho yekushandisa… inyaya yekuenzanisa zviwanikwa kuti tiwedzere kuwanda kwesimba ratinoisa mune yega yega. Fungidzira yako dashboard sebhodhi rezwi, uchikwidza kumusoro uye pasi dials kusvikira mumhanzi wakanaka. Kudzoka kwekudyara kwemasocial media anogona kuyerwa - asi chokwadi chiripo chisina kujeka kupfuura mamwe emazano kunze uko.
Cherechedza: Unogona tenga chaiyo yekupfuura kuSocial Media Kushambadzira Nyika nemari shoma yekupinda uye iwe unogona kuteerera kuchikamu changu uye nezvimwe zvehurukuro!
Tags: zvemukati kushambadzira roiemail kushambadzira kudzoka pane investmentemail roikushambadzira roimroiakabhadhara kutsvaga roidzoka pakudyaratsvaga kushambadzira roimagariro enhau anodzoka mukudyarapasocial media roi
Kuvimba, Zvemagariro Media uye Sponsoring Passion
Mar 28, 2014 pa 3: 30 PM
Ah, humambo hwangu kune yakanaka yekushambadzira otomatiki chishandiso chinogona kuteedzera mutauro wedhijitari uye kubata akawanda-chiteshi kushambadzira, kutungamira zvibodzwa, nezvimwe…. o, mirira. 😉 #Eloqua.